Somaliland: Maxaa kala haysta Madaxweyne ku-xigeenka iyo deriskiisa (Jaarkiisa)? |
Somaliland: Maxaa kala haysta Madaxweyne ku-xigeenka iyo deriskiisa (Jaarkiisa)?
Hargeysa(GNN)-Qoysas degen guryaha jaarka la ah Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) gurigiisa gaarka ah ee uu degen yahay oo ku yaalla Xaafada Shacabka, ayaa cabasho ka muujiyey handidaad iyo cago-juglayn ay kala kulmeen, waxaanay ku eeddeeyeen inay askartiisu tacadi ku hayso.
Waxa kamida Qoysaskaa Haweenay danyar ah oo muddo dheer ka cabanaysay inay dhibane u tahay Madaxweyne ku-xigeenka, taasoo ay ku mutaysatay xadhig, xoog-sheegasho iyo xad-gudubyo kale oo ay Ciidanka Ilaalada u ahi ku hayaan Gabadhaas.
Waxa kale oo kamida Qoysaskaas kuwo degen Guryaha hareeraha ka xiga Guriga Madaxweyne ku-xigeenka, kuwaasoo ku jira Guryo daarro ah oo Dayrku ka dhexeeyo Gurigiisa.
Qaar kamida Dadkaas ayaa ka soo muuqday Warbaahinta maalmihii u dambeeyey, waxaanay sheegeen in rasaas nool-nool ay ku rideen Askara ilaalisa Guriga Madaxweyne ku-xigeenku, xabbadaasoo aan khasaare dhimasho iyo dhaawac culus gaadhsiinin, balse waxyeello sahlani ka soo gaadhay.
Maaha markii ugu horaysay ee ay Warbaahinta ka hadlaan Dad kamida jiiraanka guriga Madaxweyne ku-xigeenka , balse cabashada soo noqnoqtay ayaa ah mid fool-xumo ku ah Masuulka labaad ee Qaranka ugu sareeya oo ay ahayd inuu mar walba iska banbaaniyo wixii fidmo iyo cabasho kaga imanaya umadda uu Madaxweynaha u yahay ee Jaarkiisa.
Waxaanay arrintan oo soo noqnoqtaa ka hor imanaysaa Xaqa ay Diinta Islaamka ku waajibisay Umadda jaarka ah taasoo if iyo Aakhiraba lagula xisaabtamayo, wixii dhib iyo wanaag ay kala muteystaan.
Halkan ka Daawo Muxaadiro ku saabsan sida uu Islaamku u ilaaliyey Jaarnimada: